XOG RASMI AH: Somaliland oo hubkeeda culus kala baxday Tukaraq, Maleeshiyada Sool u dhalatay oo la keenay Jiidaha Hore & Khilaafka ugu xooga badnaa oo taagan. – Puntlandtimes
LAASCAANOOD(P-TIMES)- Warsidaha Puntlandtimes.com wuxuu helay faahfaahin qarsoodi oo kasoo baxday kulan gaar ah oo shalay iyo habeen horeba ka dhacay Xerada Gooja-Cade oo ah taliska ugu weyn ee ciidamada Somaliland kaga sugan gobalka Sool, gaar ahaana Jiidaha dagaalka ee Tukaraq iyo Gambara, kaas oo dhexmaray taliyaasha howlgalinta iyo kuwa xukuma maleeshiyadka layskugu keenay Jiidaha dagaalka.
Taliyaha ciidamada Somaliland Nuux Taani Ismaaciil oo wajahayey maalmihii ugu dambeeyey culeyskii ugu badnaa oo dhanka Puntland uga yimaada ayaa ciyaaraya kaartooyin dagaal oo midba mar u soo baxayo, wuxuuna go’aamiyey kaarto cusub oo ay ka mid yihiin.
In dhamaan hubka culus ee Somaliland laga soo saaro jiidaha dagaalka ee Tukaraq iyo Gambara, isla markaasna lagu reebo Tiknikada yar yar iyo kuwa waa weyn ee ay leeyihiin beelaha barriga Somaliland.
In difaaca koowaad iyo 2aadba ay noqdaan maleeshiyaadka ka soo jeeda magaalada Laascaano & kuwa u dhashay gobalka Sanaag ee kamidka ah ciidamadaas, si ay u noqdaan gidaarka ama difaaca ciidamada.
In haddii lagu jabsho dagaalka koowaad ee Tukaraq ay difaaca labaad ee xooga badan ka dhigtaan Buundada Gambara iyo toggaas oo ah mid dheer, isla markaasna ay adag tahay in si fudud ay tiknikada dagaalka uga gudubto.
In hubka waa weyn ee dagaalka la dhigo buuraha magaalada Laascaanod ka xiga dhinaca Koonfurta & Waqooyiga, si ay ugu dagaalaman gudaha magaalada, Sidaas oo kale ciidamadooda oo laga bedelay dharka loona galiyey dhar shacab ayuu sheegay in lagalinayo gudaha magaalada oo ay sidaas kula dagaalamayaan ciidamada Puntland.
Amarada iyo talaabooyinka uu qaaday Nuux Taani waxaa si adag uga hor yimi qaar kamid ah maleeshiyaadka maamulka Hargeysa ee kasoo jeeda magaalada Laascaano, waxayna sheegeen in ay u arkaan qorshe ladoonayo in kaligood lagu galiyo dagaal aysan awoodiisa iyo tabartiisaba laheyn.
Korneylka u dhashay magaalada Laascaano ee hadda kaligiis ku haray fikradda Somaliland ee Sool, Mahad Cambaashe wuxuu cadeeyey in aysan ciidamadiisu noqoneyn difaaca koowaad, balse ay ka mid yihiin ciidamada Somaliland ayna tahay in dagaalka wadajir loo galo.
Ina Cambaashe wuxuu horey uga carooday ciidamada Somaliland dagaalkii dhacay 24-ka bishii hore oo si adag loogu jabshay ciidamadiisa lagana gubay in ka badan 6 baabuurta dagaalka ah oo uu ku jiro qoriga Zuu-ga loo yaqaano oo aan ilaa hadda waxba laga qaban.
Si adag ayey taliyaasha qaarkood u diideen amarada uga yimi taliyahooda Nuux Taani, waxayna sheegeen in aysan u arkin talaabo sax ah, balse ay muujinayso walaaca iyo welwelka ay qabto Somaliland ee ku aadan in ay kalsooni ku qabin ciidamadeeda kusugan jiidaha Gobalka Sool.
Kulankii socday 48 saac ee lasoo dhaafay wuxuu ku dhamaaday natiijo la`aan, waxaana ay Ogaatay Puntlandtimes.com in Nuux Taani oo fulinaya amarka Madaxdiisa uu hubkii cuslaa ka qaaday Jiidaha Tukaraq iyo Gambara, ayna iskugu geeyen deegaanka Gooja-Cade oo 6KM u jira magaalada Laascaano, kana xiga dhinaca Waqooyiga.
Argagaxa iyo kala amar-qaadasho la`aanta ciidamada Somaliland ayaa soo taagneyd tan iyo duulaankii dhacay 24-kii bishan, kaas oo muujiyey awooda rasmiga ah ee ciidamadaas, waxaana ay la kulmeen khasaare xoog badan, taas oo dhalisay in ay isku kalsoonaan wayaan dhinacyadan.
Ina Canbaashe says:
La Soco Qaybta Danbe………………
Doqonkaagaan “ina cambaashe ” isku sheegay. Inaad xoolo caadi ah tahay waxaa ii muujinaya
1. Nin aadan ahayn ayaad sheeganaysaa. OO karti iyo xiniinyaha aadan lahayn ku doonaysay.
2.Qoraalkaan meelo badan buu kujiraa OO rag beesha Dhexe baa soo qoray.
Qoraalkii xitaa ma ka caajisteen. Waa copy iyo paste wixiina miyaa hada.
Hadii uu niyad iyo caqli hal abuur kugu jirin xitaa qoraalkii aad ka caajisteen. Bal sidee dagaal rag iskaga celinaysiin? Misa cay baa iga kaa difaaci. Dhigaaga bil Ramadaan baan halaalaystay. Adna xagan baad nac nac ka wadaa.
Idoor Biiqey says:
Kkkkkkkkkk idoor meel walba aan ku arkoo waxey iska dhiigan Dhulbahante. Sidaas inay ku qabsanayan SSC bay umaleyaan. Waa xoolow markay marqaanka gaaro. Kkkkkkkkkkk
Jamac Ziyaad says:
Hadaanu Nahay Beesha Dhulbahante Gaar ahan Beesha UGU deegamada Badan ee Degta OoG Ilaa Yoocada Waxan Hiil IYO Hooba La Garap Taaganahy Jamhuriyada Somaliland
“Ragbaa abaal Gala ragbaana guda”
Somaliland abaal bay nagu leedahay iyadaanan taladeeda wax ku leenahay
Waxaana nagu ballana inta nin jamacziyad ahi noolyahay inaan xagayaga looga soo dhacayn qarankayaga
Ma diidayo nin harti ahbaan ahay oo daarood ah lkn daarood khazab maaha inuu Dowlad wada lahaado waxana tusale kuu ah mareexan IYO ogaden (Jubaland) Ogaden (Ismamulka Somalida ithiopia) Ogaden (Kenya).
Majeerteen haduu jecelyahay Taleex nagamuu Soo Weerareen oo dhiigayaga muu xalashadeen Maalinkaas maanu Wllkay ahyn Ma Maantuu leedahay harti waa wlladayo
Majeerteen wllahi waa danayste hawiye,ogaadeen,Mareexan,Jareer iyo Isaaqba way nookiin Dhaaman.
IIDOOR ABAAHIYE says:
JAAMAC SIYAAD ANIGAA AH KAN KU QARAANAYOW IIDOOR INAN GUMEED AH OO AAN IS SHEEGI KARIN AYAAD TAHAY. DHULBAHANTE WAA HARTI DAGAALKANA WAA LOO MIDAYSANYAHAY IIDOORNA SIFIICAN AYAA LOO ABAAHINYA.
Adrienne Innocenti says:
Wadani dhaartay🇸🇴 says:
War soomaaliyeey ninkan iga horeeyay ugu qoran tahay adriene waa saqajaan sirdoonka wadamada shisheeyee xogteena baraha bulshada karaadiya weeye war intaynu isku jeedno ayaa nalaga dhex faaidaysanayaa war reerkan la yiraahdo isaaq waa kansar umada soomaaliyeed qabyaalad la dhex taagan war aynu ka tashano soomaaliyeey kuligeen waynu mideysanahay waqooyi,koonfur,soomaali galbeed,NFD, iyo jabuutiba markii reerkaa isaaq laga reebo war aynu ka tashano reerkaa wallaahi kansar bay nagula jiraa